रमेश प्रसाईको लागि टिका सानुले गाईन् यस्तो गीत (भिडियो) – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Video/रमेश प्रसाईको लागि टिका सानुले गाईन् यस्तो गीत (भिडियो)
सामाजिक संजालमा उनलाई रुचाउने समर्थकहरुको सङ्ख्या दिनानु दिन बढ्दो छ । युट्युबमा उनका दर्जनौं प्रत्यक्ष दोहोरीहरु सुन्न र हेर्न पाइन्छ । औपचारिक रुपमा रेकर्ड भएका गीतहरुको सङ्ख्या पनि दर्जनौं पुगिसकेको छ । इन्द्रेणी कार्यक्रममा सहभागी भएर गरेका धेरै परोपकारी कार्यले उनलाई लोकप्रिय मात्र बनाएन कलाकारका साथै समाजसेवीको रुपमा समेत स्थापित गरिदियो ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **.
जस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि मुस्कुराइरहने उनको बानीलाई इस्वरीय देन नै मान्न सकिन्छ । टिका सानुलाई केवल कलाकार मात्र भनेर सम्बोधन गरियो भने सायद अन्याय पनि हुन सक्छ । उनी कलाकारका साथै एक सच्चा समाजसेवी पनि हुन् ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **.
राहुलले पुनः सिन्दुर हालेर यस्तो मजाग गरेपछि स्मिताको हाँसो रोकिएन (भिडियो)
महाभारत ३ मिनेटमा, नेपाली शब्दकोष ५ मिनेटमा पढेर सुनाउने विजय शाहीको हेर्नुस चमत्कार (हेर्नुहोस भिडियो)